‘कथा काठमाडु’ संग प्रियंकाको दुरी , कतै पछुताएकी त होईन ? - Everest Media News
Home ब्लग र विचार ‘कथा काठमाडु’ संग प्रियंकाको दुरी , कतै पछुताएकी त होईन ?
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सर्वाधिक व्यस्त , चर्चा र बिवादमा पनि आउँने नायिका हुन् प्रियंका कार्की । आफनो पहिरनदेखि आयुषमान देसराज जोशीसंगको प्रेम लगायतका विभिन्न कुराहरुलाई लिएर चर्चामा आउँने गरेकी प्रियंका पछिल्लो समय सबैभन्दा ‘कथा काठमाडु’ नामक फिल्मको गीत रातको कुरा कारण मिडियामा लाइमलाईटमा आईन् ।
गीतमा उनको र प्रमोद अग्रहरीबीचको इन्टिमेट दृश्यको कारण आलोचना खेपेकी प्रियंकाको यस फिल्मबाट दुरी बढेको देखिएको छ । गीत रिलिजदेखि ट्रेलर रिलिज कार्यक्रमसम्म उनको अनुपस्थिती देखियो । हुनत गीत रिलिज हुँदा उनी अमेरिकामा थिईन् भने ट्रेलर रिलिज हुँदा अनमोल इभ कार्यक्रममा व्यस्त छिन् ।
यो एउटा संयोग पनि हो तर ट्रेलर रिलिज जस्तो कार्यक्रममा उनको उपस्थिती नहुन र फिल्मको बारेमा पनि बोल्नै नखोज्नुले फिल्मबाट उनको दुरी स्पस्ट देखिन्छ । त्यतीमात्र होईन उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि न त गीत सेयर गरेकीछिन् नत पोस्टर ट्रेलर नै । सम्भवत आफनो हट दृश्यको बिवादबाट टाढा रहनको लागि पनि प्रियंकाले यो हतकाण्ड अपनाएकी हुन् ।
ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा प्रियंकाको अनुपस्थितीको बारेमा बोल्दै निर्देशक संगिता श्रेष्ठले सम्भवत मिडियाकै कारणले उनी टाढा भएको हुन सक्ने बताएकीछिन् । फिल्ममा इन्टिमेट दृश्यका बारेमा पहिले नै कलाकारहरुसंग छलफल गरेर नै राखिएको उनले बताईन् । उनले भनिन् “अब प्रियंकाले फिल्मको बारेमा बोल्नै चाहदिनन् भने यसमा म के भन्न सक्छु र ??” हुन पनि हो दृश्य दिन सक्नेले फिल्मको बारेमा पनि खुलेर बोल्न सक्नै पर्छ त्यो पनि एउटा कलाकारको नाताले तर प्रियंकाको हकमा भने त्यस्तो देखिएन । कतै प्रियंकालाई त्यस्तो दृश्य दिएकोमा पछुतो त भएको होईन ??
‘कथा काठमाण्डु’ को ‘हट एण्ड बोल्ड’ ट्रेलर रिलिज (हेर्नुहोस भिडियो सहित)…..